Steve Jobs: Avelao izy ireo hihinana tranga! | Martech Zone
Steve Jobs: Avelao izy ireo hihinana tranga!
Zoma, Jolay 16, 2010 Sabotsy, Oktobra 18, 2014 Douglas Karr
Manoratra an'ity amin'ny kitendry Apple aho, miaraka amin'ny Apple MacBookPro, amin'ny Apple Cinema Display, miaraka amin'ny totozy Apple… mifandray amin'ny Apple Time Machine. Tsy miantso ny tenako ho fanboy Apple aho, fa ny kalitaon'ny vokatr'izy ireo dia mendrika ny sarany fanampiny araka ny hevitro.
Tsy ny hatsaran'ny vokatra azon'izy ireo ihany no tiako, fa ny mistika ihany koa fa ny faharanitan-tsaina Apple dia dingana iray alohan'ny iray hafa ary dingana ambonimbony rehetra. Azo antoka, ny dokambarotra Apple mifanohitra amin'ny PC dia mahatsikaiky, maharary (ho an'ny PC) ary nampitaha ireo rafitra roa. Saingy nampitahain'izy ireo ny elanelana tsy mampino eo amin'ireo rafitra, fa tsy ny fomba itovizany.
mandra amin'izao fotoana izao.
Steve Jobs dia namaky ny roapolo taonan'ny varotra marika Apple sy ny mistika tonga lafatra androany tamin'ny fanekena fa ny Apple iPhone 4 dia toy ny telefaona hafa ihany, milaza, “Mazava ho azy fa tsy tokana amin'ny iPhone 4… afaka mandeha amin'ny Youtube ianao ary mahita ireo telefaona Nokia sy telefaona Motorola manao zavatra mitovy amin'izany."
Ao aoriany eo amin'ny efijery:
Tsy miavaka amin'ny iPhone
Wow. Miaraka amin'ny teny 170,000 mahery ao amin'ny rakibolana anglisy, dia nanapa-kevitra i Steve Jobs fa hampiasa ilay teny tokana tena lehibe izay hitako fa mitovy amin'ny marika Apple. Unique. Rehefa nividy iPhone zanako vavy aho ary ny faktiora dia 30% mihoatra ny faktiora Verizon (Droid) dia nieritreritra aho tsy manam-paharoa dia ilay naloako mihitsy. Tsy mampaninona ahy ny mandoa vola fanampiny ho an'ny tsy manam-paharoa…
Apple dia tsy manam-paharoa. Mandraka androany. Mpanamboatra hafa fotsiny izy ireo izao fantany fa nanana olana izy ireo, saingy niavonavona loatra ka nanapa-kevitra ny hamoaka ny vokariny na izany na tsy izany. Nilaza i Jobs fa ny lahatsoratra Bloomberg "dia crock", izay mametraka fanontaniana hoe karazana fitsapana inona no tena nataon'i Apple?
Ka anio, valintenin'i Jobs ho an'ny be sy ny maro? "Avelao izy ireo hihinana mofomamy!". Tsy tena nilaza izany izy… fa efa akaiky: “Avelao izy ireo hanana tranga malalaka!”
Tags: paomaiPhone 4steve jobs
Manentana ny spice taloha: Rehefa ao anaty fisalasalana ianao dia mandehana
Ny Combo mpandresy amin'ny vokatra, safidy ary fihetsem-po
Jul 17, 2010 amin'ny 9: 04 AM
Tompo ô, tsy tonga saina mihitsy aho rehefa niteny an'io izy fa ianao no mibaribary. Hey daholo ny rehetra mandoa avo roa heny amin'ny vokatray satria amin'ny entanay dia tsy mandoa ny vokatra fotsiny ianao fa mandoa ny zo ho hip sy mangatsiatsiaka. Andraso, raha eritreretina, toa ny olon-drehetra ihany izahay. Fa hotazoninay ny volanao. Misaotra.
Jul 17, 2010 amin'ny 9: 05 AM
Ho fanamarihan'i Doug, na inona na inona hohaninao na sotroinao tato anatin'ny andro vitsivitsy dia tohizo izany. Ny lahatsoratra bilaogy vitsivitsy farany nataonao no anisan'ny tsara indrindra novakiako. Vita tsara!
Jul 17, 2010 amin'ny 11: 36 AM
Misaotra Patric! Tena mankasitraka ireo teny tsara fanahy. Raha ny marina dia voan'ny aretim-bavony aho… mety hieritreritra tsara kokoa aho rehefa mijanona ao amin'ny efitrano kely misy taila mandritra ny andro. :-[
Jul 22, 2010 amin'ny 11: 04 AM
Tiako ny hevitrao momba ny teny hoe "tsy manam-paharoa", saingy tsy maintsy miombon-kevitra aminao aho amin'ny hevitrao fa ity fivoarana iray ity dia mandondona an'i Apple ao anaty barika amin'ny gidro sisa. Toy ny milaza fa nahazo fahombiazana i Apple noho ny antenna.
Ny iPhone dia mizara fitoviana be dia be amin'ny telefaona biriky motorola voalohany - isa, lakile, processeur kely antenne, fa ny fahasamihafana dia ny fanavaozana sy ny rindrambaiko. Ny antenne dia tsy manafoana ny zava-misy fa ny iphone dia tena fitaovana an-jatony - boky, filalaovana (lalao) fitaovana ustream na plumb-bob na ambaratonga hitarainana mafy.
Ny laza ho an'ny maha-tokana sy ny filana ny Next Big Thing dia mety niteraka 20% amin'ny varotra tany am-boalohany fa raha ny tena izy dia nanatontosa ny fampanantenany amin'ny maha-fitaovana fanovana azy no nahatonga azy hirohondrohona. Ny finday hafa rehetra manana olana amin'ny antenne dia mbola mpanaraka.